बीबीएलः सन्दीपको टोलीलाई अर्को सफलता, सिड्नीको पाँचौ विकेट गुम्यो ! - Everest Dainik - News from Nepal
बीबीएलः सन्दीपको टोलीलाई अर्को सफलता, सिड्नीको पाँचौ विकेट गुम्यो !
काठमाडौं, माघ २७ । अष्ट्रेलियामा जारी बिग ब्याश लिग (बीबीएल) अन्तर्गत नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आवद्ध मेलबर्न स्टार्सलेले दिएको १६९ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा सिड्नी सिक्सर्सले पाँचौ विकेट गुमाएको छ । उसले पाँचौ विकेटका रुपमा जेसी सिलिकलाई गुमाएको हो । उनलाई एडम जाम्पाले आउट गरे । यसअघि, सिड्नीका मोइसेस हेनरिक्स (कप्तान), जेम्स भिन्स, जोस फिलिप र डेनियल हुगेस आउट भइसकेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस अफगानिस्तान प्रिमियर लिगः सन्दिपको टिम र क्रीस गेलको लेजेन्ड्स भिड्दै
यसअघि, टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको मेलबर्नले निर्धारित २० ओभरमा ६ विकेट गुमाउँदै १६८ रन बनायो । उसका लागि सर्बाधिक कप्तान ग्लेन म्याक्सवलले ८२, पिटर ह्यान्सकम्बले ३५, मार्कस स्टोनिसले ३४, निक म्याठसनले १३ रन प्रहार गरे । बलिङमा सिड्नीका टोम कुरनले २, सीन अब्बोट र स्टीव ओ कीफेले समान एकएक विकेट लिए । सेमिफाइनल पुग्नका लागि सन्दीपको टोलीले आजको खेल जित्नैपर्ने हुन्छ।